Maxay yihiin, sidee loo aasaasay iyo noocyada mowjadaha | Saadaasha Shabakadda
Maxay yihiin, sidee loo aasaasay iyo noocyada mowjadaha
Waxaan dhamaanteen jecel nahay inaan aadno xeebta oo aan ku raaxeysano cimilada wanaagsan, qorax soo baxno oo aan qubays wanaagsan dhigno. Si kastaba ha noqotee, maalmaha leh dabeyl xoog leh, mowjadaha ayaa naga horjoogsanaya inaan qubeysano qubeyskaas qabow. Xaqiiqdii waxaad waligaa ka fikirtay sida hirarkaas aan dhammaadka lahayn ee aan dhammaanayn, laakiin ma garanaysid sababta ama mowjadaha runti yihiin.
Ma rabtaa inaad ogaato waxa ay yihiin hirarka badda iyo sida ay u samaysan yihiin?
1 Waa maxay mawjaddu?
3 Waxyaabaha ku lug leh abuuritaankeeda
4 Hab kale oo loo soo saaro
5 Noocyada hirarka
Waa maxay mawjaddu?
Mawjaddu wax kale ma aha ee waa baddel biyo ah oo dul jooga badda dusheeda. Waxay awood u leeyihiin inay ku safraan dhowr kiiloo mitir badda iyo, waxay kuxirantahay dabaysha, waxay ku sameeyaan xawaare sare ama ka hooseeya. Markay mowjaduhu gaaraan xeebta, way jabaan oo ay dhammaystiraan meertadooda.
In kasta oo badanaa loo maleeyo in hirarka ay sababaan ficilka dabaysha, tani way ka sii sii dheereysaa. Soosaaraha dhabta ah ee mowjadu ma aha dabaysha, laakiin waa Qorraxda.Waa Qorrax kululeysa jawiga dhulka, laakiin kama dhigayso inay labis ka wada saran tahay. Taasi waa, dhinacyada dhulka qaar waxay uga kululaadaan ficilka Qorraxda kuwa kale. Marka tani dhacdo, cadaadiska jawiga ayaa isbedelaya. Meelaha hawadu ka diirran tahay, cadaadiska hawadu wuu sareeyaa aagagga xasilloonida iyo cimilada wanaagsan ayaa laga abuuray, halkaasoo ay ku badan yihiin xinjirowga lidka ku ah Dhinaca kale, marka aaggu aanu aad uga kululayn Qorraxda, cadaadiska jawiga ayaa hooseeya. Tani waxay keentaa dabaylaha inay ku samaysmaan jihada cadaadiska ka yar ee cadaadiska badan.
Dhaqdhaqaaqa dabaysha ee jawigu wuxuu u shaqeeyaa si la mid ah kan biyaha. Dareeraha, xaaladdan dabaysha, waxay u egtahay inay baxdo laga bilaabo meesha cadaadis badan ka jiro iyo meesha u yar. Markay sii weynaato farqiga u dhexeeya cadaadiska u dhexeeya aag iyo aag kale, ayay dabayl badani sii soconaysaa waxayna u horseedi doontaa duufaanno.
Markay dabayshu bilawdo inay kacdo oo ay wax yeeleyso dusha sare ee badda, jajabyada hawadu waxay ku xoqaan qaybaha biyaha iyo mawjadaha yaryar ayaa bilaaba inay samaystaan. Kuwan waxaa lagu magacaabaa hirar madaxeed waxayna yihiin wax aan ka badneyn mowjadaha yaryar oo kaliya dhowr mitir mitir. Haddii dabayshu ay kacdo ilaa dhawr kiilomitir, hirarka dabaylaha ayaa weynaada una horseeda hirar waaweyn.
Waxyaabaha ku lug leh abuuritaankeeda
Waxaa jira dhowr arrimood oo shardi ka dhigi kara sameynta mowjadda iyo cabirkeeda. Sida cad, dabaylo xoog badan ayaa dhaliya mowjado sare, laakiin waa inaan sidoo kale tixgalino xawaaraha iyo xoojinta waxqabadka dabaysha iyo waqtiga ay ku sii soconeyso xawaare deggan. Waxyaabaha kale ee go'aamiya sameynta noocyada kala duwan ee hirarka waa aagga ay dhibaatadu saameysey iyo qoto dheer. Markay mowjaduhu ku soo dhowaadaan xeebta, waxay u socdaan si gaabis ah qoto dheer yar awgood, halka ciriirigu sii kordhayo. Nidaamku wuu soconayaa illaa aagga la qaaday uu ka dhaqso badan yahay qaybta biyaha hoostooda ku jirta, taas oo markaa dhaqdhaqaaqa xasiloonida iyo mawjaddu kala go'do.
Waxaa jira noocyo kale oo hirar ah oo hooseeya oo wareegsan kuwaas oo lagu sameeyo kala duwanaanta cadaadiska, heerkulka iyo cusbada meelaha ku dhow. Kala duwanaanshahani waxay keenaan in biyuhu dhaqaaqaan oo ay abuuraan mowjado sameeya hirar yar yar. Tan ayaa la dhahaa hirarka badda asalka.
Mawjadaha ugu caansan ee aan ku aragno xeebta badiyaa waxay leeyihiin dherer u dhexeeya 0,5 iyo 2 mitir iyo dherer u dhexeeya 10 ilaa 40 mitir, in kastoo ay jiraan hirar dhererkoodu gaari karo 10 iyo 15 mitir.
Hab kale oo loo soo saaro
Waxaa jira hannaan kale oo dabiici ah oo sidoo kale keena abuuritaanka hirarka mana aha dabaysha. Waxay ku saabsan tahay dhulgariir. Dhulgariirradu waa geedi socod ahaan, haddii ay ka dhacaan aagga badda, waxay abuuri karaan hirar waaweyn oo loo yaqaanno tsunamis.
Markuu dhulgariir ka dhaco salka badda, isbeddelka degdegga ah ee ku yimaada dusha sare wuxuu sababa mowjado boqolaal kilomitir ah oo laga soo saaro agagaarka aaggaas. Mawjadahaasi waxay ku socdaan xawaare aan caadi aheyn oo ay ku socdaan badda dhexdeeda, gaaraya 700km / saacaddii. Xawaarahaan waxaa lala barbar dhigi karaa midka diyaaradda jet-ka.
Marka mawjadaha hirarka ahi ka fog yihiin xeebta, hirarka ayaa dhaqaaqa dhawr mitir oo dherer ah. Waa markay xeebta u dhowaato inay kordhaan 10 ilaa 20 mitir oo dherer ah waana buuro dhab ah oo biyo ah oo saamayn ku yeesha xeebta isla markaana dhaawac culus u geysta dhismayaasha ku xeeran iyo dhammaan kaabayaasha aagga.
Tsunamis waxay sababeen masiibooyin badan taariikhda. Sababtaas awgeed, saynisyahanno badan ayaa daraasad ku sameeya noocyada mowjadaha ka kaca badda si ay uga dhigaan xeebta mid nabdoon iyo, marka lagu daro, inay awood u yeeshaan inay ka faa'iideystaan ​​tirada badan ee tamarta lagu sii daayo iyaga si ay u dhaliyaan koronto ahaan habka dib loo cusboonaysiin karo.
Waxaa jira dhowr nooc oo hirar ah oo kuxiran xoogga iyo dhererka ay leeyihiin:
Hirar bilaash ah ama ruxruxaya. Kuwani waa hirar laga helo dusha sare waxaana u sabab ah kala duwanaanshaha ka dhaca heerka badda. Iyaga dhexdooda biyuhu ma hormaraan, kaliya waxay qeexaysaa leexasho markay kor iyo hoos u socdaan ku dhowaad isla meeshii uu sare u kaca hirarka asalkiisu ka soo bilaabmay.
Mawjadaha tarjumaadda. Mawjadahaasi waxay ka dhacaan agagaarka xeebta. Markay horumarsan yihiin waxay taabtaan badda hoosteeda waxayna ku dambeeyaan burburka xeebta oo sameysma xumbo badan. Markay biyuhu soo noqdaan mar labaad ayaa foomka hungurigu sameeyaa.
Hirar qasab ah. Kuwaas waxaa soo saaray ficillada rabshadaha wata ee dabaysha oo aad ayey u sarreysaa.
Iyada oo ay sabab u tahay kuleylka adduunka, heerka badda ayaa kor u kacaya mowjaduna si sii kordheysa ayey u waxyeeleynayaan xeebta. Sababtaas awgeed, waa lagama maarmaan in la ogaado wax kasta oo suurtagal ah oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa mawjadaha si xeeladeena looga dhigo meel aamin ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Maxay yihiin, sidee loo aasaasay iyo noocyada mowjadaha
Dhirtu waxay u nugushahay dhaxan isbedelka cimilada awgeed
Isbedelka cimilada ayaa sidoo kale beddeli kara hillaaca